Ceramic Grinder - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ceramic Grinder)
I-alumina e-alumina ceramic gear gear
Senza umthamo we-alumina ceramic gear gear for pepper, spice noma chilly grinder ngaphezu kweminyaka engu-12. Ngenxa yama-95% alumina ne-steaite yizinto ezifanelekayo, isetshenziswa ngaso sonke isikhathi njengento eluhlaza. Njengamanje, sinezinhlobo ezijwayelekile zohlobo olujwayelekile ukuze uvumelane nomklamo...
I-Alumina core core yokugaya I-pepper kill alumina coam core core of the cone burr yangaphakathi kanye ring burr yangaphandle esebenza ndawonye. Le-grinder yomjikelezo oyisiyingi isetshenziselwa ubukhulu be-spice grinder, usawoti grinder, i-chilli grinder kanye ne-herb grinder ngaphandle kwegundane le-pepper, ngenxa...
Umgogodla wokugaya we-pepper
Umgogodla wokugaya we-pepper Ngesinye isikhathi, umgodla omncane we-pepper osetshenziselwa isikhathi esithile sokugaya ukuze kudingeke umgogodla omncane we-ceramic ukugaya. I-Alumina core grinding core iyinxenye yokugaya e-friendly futhi eco-friendly. Okwamanje, kuvame ukusetshenziselwa i-spice grinder, usawoti...
I-FDA isitifiketi se-oily spice alumina ceramic burr
I-oily spice mill alumina ceramic burr Le-alumina burr ceramic esetshenziselwa ubukhulu be-spice grinder yama-oily, i-spice mill, i-pepper kill / grinder, enokumelana nokushisa okuphezulu, ukushisa okuphezulu okusebenzayo, izici ezinhle zokugqoka, ukumelana nokugqoka okukhulu, ukuqina okukhulu ukushisa okukhulu....
I-Alumina Ceramic Cinding Core for Pepper Mill
I-Alumina Ceramic Cinding Core for Pepper Mill I-Ceramic Grinding Core ye-Pepper Mill Okuqukethwe: 95% i-Al2O3, i-steatite ozikhethelayo 2.Izici: 1) Ubunzima obukhulu, ukuqina okuhle, ukugqoka ukumelana nokusebenza okuphezulu 2) Ingahlinzekwa umbala we-multiple & diffierent. 3) Kungenziwa kukhiqizwa njengokudweba...